အောကျတိုဘာ 21, 2019 – Healthy Life Journal
အဆင်သင့် အစာစားကျင့်က မျိုးဆက်သုံးဆက်ထိ သက်ရောက်မှုရှိစေနိုင်
၊ ကိုထက် ၊ အဆင်သင့်အစာနဲ့ အဆီအအိမ့်များတဲ့ အစာစားတဲ့ အမျိုးသမီးတွေက သူတို့မိသားစုရဲ့ နောင်မျိုးဆက်သုံးဆက်အထိ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့ လေ့လာမှုအသစ်အရ သိရပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အဆင်သင့်အစာစားတဲ့အကျင့်က သူတို့ကလေး၊ မြေးနဲ့မြစ်တွေအထိတောင် အ၀လွန်ခြင်း၊ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါဖြစ်ခြင်းနဲ့ အရက်၊ မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်းတွေအထိ ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့...
မေး. ဆရာ လေဖြတ်ရောဂါကို ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲ။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေမှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. – Paralysis လေဖြတ်စေတဲ့ အကြောင်းတရားတွေကများတယ်။ အာရုံကြောစနစ်၊ အထူးသဖြင့် ခါးရိုးမကြီးထဲက အာရုံကြောမှာ တခုခုဖြစ်ရာကနေဆက်ဖြစ်တယ်။ – Trauma with nerve injury ထိခိုက်ဒဏ်ရာ၊...
ဒေါက်တာတင့်ဆွေ မေး. ကျွန်မယောင်းမက အသက် ၄၁ နှစ်ပါ။ အသက် ၂၅နှစ်ကနေစပြီး သွေးတိုးကျဆေး ဆက်တိုက်သောက်လာခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ သူ့ကျောက်ကပ် ကျုံ့နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ နယ်မှာနေတော့ သွေးတိုးကျတဲ့ဆေးကိုသောက်ပြီး တခြားရောဂါကို မစစ်ဆေးခဲ့ဖူးပါ။ အခုပါမောက္ခ – -နဲ့ ပြတော့ ဆရာက...